ISDHEXGALKA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat torsdag 31 augusti 2006 kl 09.00
Shaqo, shaqo iyo mar kale shaqo
Dad tiradodu gaareyso hal malyuun ee dalkan ku dhaqan ayaa ku dhshey asal ahaanna ka oo jeeda dalka dibaddiisa. 700 000 oo ruux waa dhallaan uu waalidkood ka oo jeo dalka ibadiisa. Dadyowgaasi waxaa lagu magacabaa ”soo galoti”.
Waa dad isugu jira kooxo kala duwan tusale ahaan kuwo gaarsiisan her jaamicadeed iyo kuwa aa laheyn waxbarash). Ereyga soo galooti ayaa beryahan dambe lagu macneeyaa dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa oo ey la soo gudboonaadn faquuqnantu, haddey noqon laheyd dhan shaqo iyo haddey noqon lahyd dhan deegaanba.
Dhibaatooyinku wey fara badan yihiin waxaa ka mid ah: 81 boqolkiiba dadyoowga asal ahaan ka oo jeed iswidhen waa kuwo shaqeeya am waxbarasho ku jira, tiradaa marka loo barbar dhigo dadyoowga dibadda ku dhahey waxey garsiisan tahy 64 boqolkiiba. Keliya 52 boqolkiiba ardeyda leh waalidiin ajnabiya ayaa tacliintooda sii wata, halka dhalaanka iswiidhishka ee tacliintooda sii wata ey tiradoodu garsiisan tahey 70 boqolkiiba.
Xisbiga haya talada dalka, kan bidixda iyo kan cimilada ayaa xogga saraya sidii ey ugu abuuri lahayeen ddyoowgasi shaqooyin la miisaaniyad geliyo, iskuulad iyo hooyba. Dhabbada xalka xisbiyadda mucaradka ee isdhexgalka ayey aburida shaqoyin dheraad ah. Iyada oo la jarayo khidamdda shaqabixinta iyo in wax laga bedelo habka barashd luuqada iwiidhishka.
Arrimmahan waa waxyaabaha ey heshiiska ka yihiin xisbig soildemokrat-ka, kan bidixda iyo xisbiga cimiladu doorshada horted:
* Ku soo dhoweynta goobaha shaqada (*) oo la joogteyo
* In miisaaniyad dheerad ah la siiyo ururka caalamiga e sharaakiisha marka la soo gaabiyana loo yaqaan (IFS)
* Soo saaridda sannadkiiba 300 oo macallimiin oo asal ahaan ka soo jeda dalka dibaddiisa
* In muddo lau daro waxbarashada jaamicaddaha ee an maaiga aheyn (*)
* 1 000 rux oo laga howl geliyo iskuulaadka ku aal xafadha ey ajnabigu ku badan yihiin
* Guryo kiro ah e laga hiso goobaha ey deggen yihiin iswiidhisku
* Lacag dheriya ee loou talagaley goobaha ey dhalinyaradu ku kulanto, heyadaha ka hortagga cunsuriyadda iyo weliba goobaha xannaanada waayeelka e looga hadlo luuqado ajnabiya
Xisbiga bidixdu wuxuu kaloo soo jedinayaa in heyadaha dawladdu takoor saaran adeegyada shirkadaha wax takoora.
Xisbiga cimiadu wuxuu soo jeedinayaa siinta miisaaniyd deyn ah shirkadaha ka howlgala goobaha jnabigu ku badan yihiin.
Xisbiyada mucaaradka ayey qorshooyinkooda dhaqale ku cadyihiin arrimmo la xiriira is hexgalka:
1. Bilow shaqa cusub (in aan laga qaadin qidmadda shaqabilowga) saddexda sannadood ee ugu horreysa shakhsiga jnabiga ah ee la siiyo sharciga deggenansha iyo kan shaqada PUT) (*). Isla waqtigaana ey dadyoowgaasi ey luuqadda dhitaan.
2. Hbka barashada luuqadda ee Sfi-waxaa lagu bedeleyaa dhaqale waxbarasho e shakhsiga la siiyo, halkasina oo ajnabiga dalka ku cusubi ey ku dooranayan iskuulka e doonan
3. Nidam ka dhakhsa kana sahla ee lagu qiimeeyo tacliinta/khibradda ruuxu leeyahy.
4. Magdhow sarreysa e lga qaado ciddii ku dhaqaaqda faqooid
5. Ha lag tijaaineyo ee aan looga jarin ajnabiga dalka ku cusub gunnada ceydha haddii ey shaqa bilaaban
6. Jobb- och utvecklingsgaranti – In laga caawiyo shaqaradin iyo goobo tababar, iyada o la siinyo 65 boqolkiiba musharka
Wixii intaa ka baxsan wey ku kala duwan yihiin xisbiyada midigta e afart ah. Xisbiga Mudarat-ka, kristdemokrat-ka iyo folkpartiet waxey doonayaan tijaabo la xiriirta in aan magaca shakhsiga lagu qorin warqadda codsiga shaqada (*).
Xisbiga Mudarat-ku wuxuu qorsheynayaa in albaabada loo laabo heyadda isdhexgalka sannadka 2007-da.
Xisbiga Folkpartiet wuxuu soo jedinayaa saddex acadood ee bilaash ah luuqadda iswiidhishka laguna dhigo iskuuladka xannaanadda caruurta iyo shuruudo la xiriira aqoonta luuqdda kolka shakhsigu dooneyo inuu qaato dhalashaa dalka.
Xisbiga Kristdemokrat-kuna wuuu qaba fikir la xiriira in la mamnuuco xisbiyada mabaadiidoodu ku saleysn yihiin cunsuriyadda iyo midabtakoorka.
Siyasadda la xiriirta oo galootiga
Soogaloti, shqa-raadiyeyaal furan mise mid xiran?
Dalkan waxa ka jira siyasd xaddidan ee ku wajahan soo galootiga. Saddex sababood ayuu shakhsigu ku heli karaa deggenaanho: Isga oo dalbada magangelyo, isag oo ku yimaada qaraabo ahaan ama guur iyo shaqo. Waxaa jirta iney ad u yaraatey dadyoowgii dalban jirey magangelyada madama uu adkadey sharcigii qaxootiga. Sidoo kale wxa adag in deggenanho lagu helo shaqo.
Sannadkii 2004-tii waxaa la siiyey sharci shaqo dad tiradoodu gaareyso 20 000, 40 boolkiiba waxey dadkaasi ahaayeen dd a soo jeda wddammad ka baxsan ururka iowga Yurub. Waxaa shrci deggenanho lagu siiyey haqa aawadeed dad tiradoou gareyso 209 ruux.
Soogalooti ku yimada dalka shaqa aawaded waxaa su’al aad u weyn ee hortagan mustqbalka waddammad galbedka Yuub, iyada oo sidasi tahey yaney su’aashaasi ayn mid door weyn ka ciyareys loolanka doorshda e dalkan.
Waxaase jirta in farqiyadda u dhaxeysa xisbiyada ey yihiin kuwo ad u kala ad – Xisbiyadda midigta io kn cimiladu waxey doonayaan in albabada loo furo dadyoowga haqadoonka ah, halka xisbiyada s iyo vey midaa ka soo horjedan. Xisbig Socialdemokrat-ku wuxuu bilaby arrin noocaiya ee xddidan. Wasirka ocdalka Brbaro Holmberg ayaa amuurta u ololeynysey toddobadyadii ugu dambeeyey.
Midda la xiriirta siyasadda magangelyo doonka yaa leh dhinacyo kala duwan.
Xisbiyada bidixda ee (s iyo v) waxey ka soo horjeedan in xuduudda loo furo dadyoowga shaqa donka ah ”arbetskraftsinvandring”. Middaasi waxey iimeyneysa xuquuqda shaqalaha, islamarkaana busaarad ku rideysa mushaaroyina e qataan. Waxey kaloo culeys eyn soo saari lahyd nidaamka ceymisk bulshada (*). Waxaa halis ku jiri laha idaamka habwanaag-nololeedka e dalkan Iwiidhen
Xisbiga Cimilada ayaa qaba in dalkni u baahan yahey nidaam deeqsiya ee la xiriira soo galootiga shaqa doonka ah.
Sidaasoo kale waxaa iyaguna qba afarta xisbi ee mucaaradka ah. Xisbiyadasi waxey u ololeneyaan in dadyoowga haqa doonka ee u dhshy waddammada ka baxsan midowga Yurub la siyo xuquuq lamid ah kuwa y leeyihiin shucuubta Midowga Yurub oo la xiriirta iney dalka u iman karan haqa doon mudo saddex bilood ah. Shurudda keliya ee lau xirayaana tahey iney masuurfkoda iyomurashdooda is bixin karayan muddadaa. Ciddii muddadda gudaheed shaqa u hshan wxaa la siinayaa sharci deggenansho ee oconayamin sannad. Hdii muddada sannadka gudahed shaadu ka dhammatana wuxuu heysta mudo saddex bilood ah inuu shaqa kal ku helo. Dadyowga qaabka dalka kaga shaqeeya muddo shan sannadod ah waxey xaq u yeelanayaan sharciga deggenaansho ee joogtada ah, sidaa waxa lamid ah soo galootiga magangelyo doonka sharciga loogu diidey ee shaqa heysta, sidaasoo kalena muddo shan sannadood ah shaqa ka hayy dalka.
Midda a xirirta sharciga magangelyada aad ayy xisbiyadu isugu man dhaafsan yihiin. Waxaa ka mid:
* Xisbiga Fp wuxuu qabaa in la ballaariyo dadyoowga Qaraabanimo ama guur ku soo gala dalka islamarkana la hirgeliyo masuuliyadda ka saaran ciddey u yimadeen.
* Xisbiga C iyo Kd aey qaban in la siiyo qaxootiga warbixin ku saasan wajibaadka iyo xaqqa ruuxasi.
* Xisbiga Mp wuxuu qabaa in si hakad la’an ah loo siiyo sarciga deggenaanho ee joogtada cidii aan jawaab helin daabkeedii magangelyada
* Xisbiga v wuxuu soo jeedineyaa in dalkani ka noqdo heshiiskii Schengen oo ey hoosta ka saxixeen qaar ka mid waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub (*)